Ady amin’ny Pesta : Nanentana fanadiovana tamin’ny asa tana-maro ny tanora HVM -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny Pesta : Nanentana fanadiovana tamin’ny asa tana-maro ny tanora HVM
04/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mandray andraikitra. Manoloana ny firongatry ny aretina Pesta amin’izao fotoana, dia nanentana fanadiovana tamin’ny asa tana-maro ny tanora HVM. Nisantarana izany ny teto Antananarivo ka fokontany iray isaka ny boriboritany no nanatanterahana ny hetsika fanadiovana. Efa fanaon’ny tanora HVM ny firotsahana manampy ny fiarahamonina toa izao indrindra eo amin’ny lafin’ny sosialy. Anisan’ny andraikitra efa noraisin’ireto tanota ireto ny fanampiana ireo mpanasa lamba teny Ankasina tamin’ny fiandohan’ny taona. Amin’ity hetsika fanadiovana ity, ary ho fanentanana ny olona amin’ny ady amin’ny pesta, olona manodidina ny 100 isam-pokontany no nantsoina hiatrika ity asa tana-maro amin’ny fanadiovana ny tanàna ity, ary 3000 Ar isan’olona no nomena azy ireo.
Omaly dia nanaovana ity hetsika fanadiovana ity ny fokontany 67ha ho an’ny boriborintany voalohany, Ambohipotsy eny amin’ny tanàna ambony ho an’ny boriborintany faha-2, ny EPP Besarety ho an’ny boriborintany faha-3. Namontana sy ny fokontany Amborovy Andranomena kosa ho an’ny boriborintany faha-4 sy faha-6.